Ciidamada Burundi oo qaybo kamid ah dalka laga saaray – Radio SYL
Ciidamada Burundi oo qaybo kamid ah dalka laga saaray
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa walaac ka muujiyay qorshaha uu wado Midowga Afrika ee la doonayo in 28-ka bishan dalka looga saaro 1,000 askari oo ka mid ah Ciidamada Burundi, taasoo qeyb ka ah qorshaha lagu dhimayo Ciidamada AMISOM.
Waare oo la kulmay Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya Francisco Madeira iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa AMISOM ayaa u sheegay inay tahay arrin aan la gaarin xilligeeda, ayna tahay mid aad u xanuun badan in Ciidamada Burundi oo badankooda ka howlgala Sh/Dhexe dalka laga saaro.
Mr Waare ayaa qiray in khalkhal uu ku imaanayo Amniga deegaanada Hirshabeelle, maadaama Ciidamada Burundi xaruntooda Jowhar ay tahay Saldhiga ugu weyn ee Sh/Dhexe
“Waan idin kaga mahad celineynaa mudanayaal, marti gelinteenna halkan ee maanta, si aan uga doodno qorshahan kala guurka ah, waxaa ay ila tahay qorshahan kala guurka ah ugu dambeyntii waa dhab,laakiin waxaa jira go’aanno xanuun badan ,wali waxaa dhiman howlo badan oo ay tahay in la qabto, waxaanse idin ballan qaadayaa in Hirshabeelle ay sameyn doonto waxkasta oo ay awoodda oo ay tahay in la sameeyo, taas oo la xiriirta in kaliya qorshaha kala guurka la hirgeliyo ee sidoo kale aanan luminin guulahii hore aan u gaarnay” ayuu yiri Waare.
Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, Francisco Madeira ayaa isagu dhankiisa qiray inuu Waare la qabo inay tahay mid xanuun badan in Ciidamadan la saaro, hadane aan laga baaqsan Karin mmaadaama ay ku cadahay qorshaha ka bixitaanka Ciidamada AMISOM.
“Waxaan ka wada hadalnay Madaxweyne Waare sida aan u sameyn karno ama aan u hirgelin karno qorshaha kala guurka ee lagu hubinayo ama lagu xaqiijinayo sugidda ammaanka Gobolka” ayuu yiri Madeira.
Waxaa uu sidoo kale u sheegay in dhamaadka sanadkii hore 2018, ay is arkeen Saraakiisha ay quseyso arintaas, iskuna waafaqeen in qorshaha bixista uu halkiisa ahaado.
“Sannadkii la soo dhaafey bishii December, waxaa kulmay taliyayaasha ciidamada difaaca iyo madaxda Dalalka ku yahoobay Booliiska AMISOM, si ay iskula fahmaan waqtiga howlgalka, fikradda Howlgalka waa in la qaadaa Habraaca qorsheed ee lagu gaari karo” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Si kastaba wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar ayaa xilligan ah mid Madaxda iyo xubnaha Maamulka Hirshabeelle mari karin, sababo la xiriira weerarada Al-Shabaab, iyadoo hadii ay Sh/Dhexe isaga baxaan Ciidamada AMISOM aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono amniga Hirshabeelle.